Taariikhda Riyad Mahrez - BBC News Somali
"Waxaad moodaa koolo in lugihiisa la mariyay marka aad eegto sida ay kubaddu ugu dhagto lugihiisa"
Taasi waxey aheyd qiimeyn hordhac ah oo laga bixiyay ciyaaryahanka u tartamayo abaalmarinta sandka 2016 e BBC-da, waxaana iimeyntaasi bixiyay saaxiibkii carruurinomada, Madjid.
"Waxeynu aheyn kuwo midba midka kale la dagaalo, sidaa darteed Riyad wuxuu u ciyaari jirey kooxdeena," ayuu raaciyey hadalkiisa, isagoo dib u xusuusiyey ciyaarihii kubadda cagta ee xagaaga ay wada qaadan jireen, markii ay caruurta wada ahaayeen ee BeniSnous, oo ah magaalo dhacda waqooyi galbeed ee dalka Algeria.
Halkan ka codee
Hadda adduunka oo idil wuxuu ka warqabaa in awoodda Mahrez layaabkeeda uu u muuqdo mid isaga hagaya jihadeeda - kooxaha ugu waawayn kubadda cagta ayaa ku tartamo dadaal ugu jira inay ku daraan kooxdooda.
Kadib markii uu qeyb ka qaatay in Horyaalka Ingiriiska ay kaalin wanaagsan ka gasho kooxda Leicester City sanadkan 2016-ka, taasoo kamid noqotey mid ka mid ah layaabkii taariikhda kubada cagta ee Ingiriiska, Mahrez ayaa la isula soo qaadey wada hadalo badan oo lagu falan qaynayey waxyaabaha uu qabtay, taasoo ay yeesheen kooxaha Chelsea iyo Barcelona.
Isu tagga Xirfadlayaasha Cayaartoyda caalamiga ah ayaa dhawaan u codeeyay inuu nqodo ciyaaryahanka ugu fiican----, taasoo ah Afrikan-kii ugu horeeyey ee magacaabistaas helo.
Waxey aheyd xagaagii markii uu Mahrez, ku biirey kooxda Leicester, isagoo ka soo wareegay Le Havre sanadkii 2014-ka, oo uu xiligaas saluugay lacagtii uu kula joogay oo dhameyd £400,000.
Layaab ma noqon in wixii intaa ka damebeysay, uu noqdo mid si weyn loo baadi goobayo
Kooxaha waxey isku soo garbinayeen sidii ay kusoo jiidan lahaayeen ciyaaryahanka Mahrez ee qaab dhismeedka jirkiisu uu heer wanaagsan ku jiro - iyadoo ay taasi xiiso galineyso taageerayaasha, halka dhanka kalana ay tahay wax ay ku taamayaan ciyaartoyda ay kooxda ka wada tirsan yihiin.
Laakiin 25 jirka ayaa iska caabiyey doonitaanka kooxaha kale, illaa iyo xiligaa kadibna, wuxuu isku dhiiri galiyey inuu joogayo kooxda Leicester, si xirfaddiisa uu isagu sare ugu qaado mar kale.
Waxyar ayaa la iska weeydiin karaa go'aankiisa iyo dib u bogsashadiisa, iyadoo uu si adag uga siraad korey turan turooyin lasoo darsay.
Wuxuuba durbadiiba u dhaliyey afar gool kooxda Leicester xagaagan - saddex kamid ah waxuu dhaliyay intii ay socdeen ciyaaraha Horyaalka Yurub
Wuxuu kaalin wanaagsan uga soo abxay kooxda Algeriaka dib markii uu gaarsiiyay heerka ah ka qeyb galka Koobka Qaramada Afrika ee sanadka danbe ka dhacaya Gabon.
"Riyad wuxuu ka dhigay kooxda mid weyn. Qof waliba ayaa haatan garanaya Algeria Riyad dartiis," ayuu yiri saaxiibka ka tirsan hey'adda International Mehdi Abied.
"Algeria marka aan joogno dhabtii Riyadh rajo fiican ayaan ka qabnaa. Ma ahan wax fudud inaad ka noqoto ciyaar yahanka ugu wanaagsan Horyaalka Ingiriiska.
"Qof waliba Afrikaan ah wuu jecel yahay Riyaadh. Waxaan xasuustaa inaan mar kulan u tagnay dalka Itoobiya kaasoo labada qaran ay wada yeelanayeen, taageerayaasha waxey u sacaba tumayeen Riyadh, in ka badan inta ay u sacaba tumayaan kooxdooda Itoobiya!"